अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर सुत्केरी आमा अलपत्र, २२ दिने बच्चाको बिजो’ग (हेर्नुस् भिडियो)
November 2, 2020 1281
बच्चा जन्मिएप’छि आमाको न्यानो काखमा हुर्कन पाउनु बच्चाको अधिकार हो । तर एक जना महिला सुत्के’री भइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भयो ।
बच्चा जन्मनु भन्दा अगाडी नै खुट्टा नचल्ने स’मस्या थियो । बच्चा जन्मिएपछि पनि उनी अहिले अस्प’तालमै छन् । तर सानो बच्चा अहिले घरमा छ । घरमा बच्चा जन्माइन् ।
तर आमा र बच्चा दुवैजनाको खुट्टा समेत चलेन । तीन दिन सम्म पनि त्यो समस्या नहटेपछि दमक स्थित अस्पता’ल लिएर गएको छ । सो अस्प’ताले फिर्ता पठा’इदिएपछि नोवेल अस्पता’लमा भर्ना गरिएको थियो ।
अस्पतालमा उपचार गरेपछि त्यो उपचार खर्च समेत तिर्न नस’केपछि सुत्केरी अस्पता’लमै छन् । करिब ५ लाख भन्दा बढी उपचार खर्च लागेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
तर उपचार गर्ने पैसा नभएका कारण उनलाई घर ल्याउने तयारी ग’रिएको छ । तर डिस्चार्ज गर्ने पैसा नभएका कारण उनी घर आउन पाएकी छैनन् । बच्चा जन्मिएको ३ दिन देखि नै छिमेकीले उनको नवजात शिशु हुर्काइ’रहेकी छन् ।
कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएका का’रण समस्यामा परेका उनीहरु अहिले सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यका कारण पनि थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । गर्भवती अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा खान नपाएका कारण उनलाई समस्या आएको अस्पतालका चिकित्स’कले जनाएका छन् । यो सामग्री सँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न तल जानुहोस्…
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को ४७ औंँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित वेबिनार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोभिडसँग सुरक्षित रहँदै विस्तारै पर्यटन खोल्दै जानाको विकल्प नभएको बताए ।
सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक आगमन खुला गरेको थियो ।
मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य मापदण्ड’लाई कडाइका साथ पालना गर्दै पर्यटनका अन्य क्षेत्र पनि खुला गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको र यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने बताए । कोभिड महामा’रीका कारण कारण बन्द गरिएको अनरा’इभल भिसा सरकारले कात्तिक १ गते (अक्टोबर १७ ) देखि खुला गरिसकेको छ ।
पदयात्रा र पर्वतारोहण खुला भएसंँगै हालै बहराइनका राजकुमा’रसहितको टोली सफलतापूर्वक नेपालका हिमाल आरोहण गरी फर्किएको छ । यसले नेपाल कोरोनाकै बीच पनि सुरक्षित पर्यटकी’य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टरा’ईले यसलाई उपयोग गर्दै पर्यटनका अन्य क्षेत्र पनि खोल्ने तयारी भएको बताए ।
मन्त्री भट्टराईले नेपालको पहिचान हिमालको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने औंँल्याए । प्रदूषण र विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदा असर हिमाल तथा हिमतालमा पर्ने गरेको बताउँदै उनले तिनलाई जोगाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए ।
एनएमएका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले कोभिड:का कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा हिमाल आरोहणका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर तथा व्यवसायीको दैनिक जीवन निर्वा:हमा समेत समस्या देखिएको बताउँदै यस्तो महामारी तथा कठिन परस्थितिका बेला उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार र एनएमए मिलेर राहत कोष (बास्केट फण्ड) स्थापना गर्न आ:ग्रह गरे । रासस
हस्पि’टलमा पैसा तिर्न नसकेर सुत्केरी आमा अलपत्र, २२ दिनको बच्चाको बि’जोग…. हेर्नुस् भिडियो….
Prevराजा र रबि- चर्चित ज्योतिषीले गरे २०७७ सालको नेपालको यस्तो भबिस्यवाणी (भिडियो सहित)
Nextआफ्ना औंला हेरेर थाहा पाउनुहोस् तपाईको आफ्ना गोप्य कुराहरु….
भोलि कार्तिक ७ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
यी ७ नेपाली – जसले एकैचोटी विदेशी भूमिमा आफ्नो ज्यान गुमाए…..
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (85380)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (80985)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (75129)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (72704)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (67480)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (66811)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (66653)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (66511)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (63439)
निशाले पहिला यस्तो दमदार अभिनय र डान्स गर्थिन् (भिडियो सहित) (60663)
मलेशियाबाट २४ नेपालीको शव नेपाल ल्याएका क्याप्टेन विजय लामाले पोखे यस्तो दुख, भावुक हुदै यसो भन्छन्…
डिभो`र्स पछि पहिलोपटक मिडियामा आएकी प्रतिभाले रुँ`दै बखतलाई यतिसम्म भनिन्, (भिडियो हेर्नु`स्)
कल्पना दाहालको पहिलो तिज गित,यसरी छमछमि नाचिन् (भिडियो सहित)